अधिकांश वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा बढ्यो, केहीले भने घटाए, कुनकुनको बढ्यो खराब कर्जा ? - सुनाखरी न्युज
अधिकांश वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा बढ्यो, केहीले भने घटाए, कुनकुनको बढ्यो खराब कर्जा ?
Posted on: February 13, 2020 - 12:46 pm
चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा अधिकांश वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा बढेको छ । सञ्चालनमा रहेका २७ वटा वाणिज्य बैंकमध्ये, १४ वटाको खराब कर्जा गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा बढेको छ । पुस मसान्तसम्ममा सबैभन्दा धेरै खराब कर्जा सरकारी स्वामित्विको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको छ भने सबैभन्दा कम एभरेष्ट बैंकको छ ।
त्यस्तै, कुमारी बैंकको खराब कर्जा १.२२ प्रतिशतबाट १.०४ प्रतिशतमा झरेको छ । प्राइम बैंकको खराब कर्जा १.५८ प्रतिशतबाट १.४५ प्रतिशतमा झरेको छ । एभरेष्ट बैंकको खराब कर्जा ०.१९ प्रतिशतबाट ०.१६ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन वाणिज्य बैंकहरुमा सबैभन्दा कम हो । नेपाल बैंकको खराब कर्जा २.७४ प्रतिशतबाट २।६६ प्रतिशतमा झरेको छ । लक्ष्मी बैंकको खराब कर्जा १.११ प्रतिशतबाट ०.८८ प्रतिशतमा झरेको छ । सिद्धार्थ बैंकको खराब कर्जा १।६४ प्रतिशतबाट १।५५ प्रतिशतमा झरेको छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सबैभन्दा धेरै ४।७७ प्रतिशत खराब कर्जा रहेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकको खराब कर्जा ३।४० प्रतिशत रहेको थियो ।
सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकको खराब कर्जा ०.८४ प्रतिशतबाट बढेर १.६७ प्रतिशत पुगेको छ भने मेगा बैंकको खराब कर्जा १.४९ प्रतिशत पुगेको छ । नविल बैंकको खराब कर्जा ०.६२ प्रतिशतबाट बढेर ०.७५ प्रतिशत पुगेको छ । एनएमबि बैंकको खराब कर्जा १.७६ प्रतिशत पुगेको छ । ग्लोबल आईएमई बैंकको १.२० प्रतिशत पुगेको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको खराब कर्जा २।०४ प्रतिशतबाट बढेर २.९० प्रतिशत पुगेको छ भने नेपाल बंगलादेश बैंकको १.९२ प्रतिशत पुगेको छ ।
त्यस्तै, हिमालयन बैंकको खराब कर्जा १.२५ प्रतिशतबाट बढेर १.२८ प्रतिशत पुगेको छ । प्रभु बैंकको खराब कर्जा २.४७ प्रतिशतबाट बढेर ३।१२ प्रतिशत पुगेको छ । माछापूच्छ्रे बैंकको ०.४५ प्रतिशत पुगेको छ । सानिमा बैंकको खराब कर्जा ०.२४ प्रतिशतबाट बढेर ०.४१ प्रतिशत पुगेको छ । एनआईसी एशिया बैंकको ०.४६ प्रतिशत छ भने सनराइज बैंकको खराब कर्जा १.२६ प्रतिशतबाट बढेर १.।६९ प्रतिशत पुगेको छ ।